News - အဖြစ်များသည့်အမှားပြားနှင့် frame filter ကိုနှိပ်ပါ
Plate နှင့် frame filter filter သည်မိလ္လာကုသမှုစနစ်တွင်ရွှံ့နွံများသန့်စင်ရန်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်မှာမိလ္လာဆေးပြီးနောက်သန့်ရှင်းသောကိတ်မုန့် (ရွှံ့ကိတ်မုန့်) ကိုဖွဲ့စည်းရန်ရွှံ့နွံများကိုစစ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပန်းကန်နှင့်ဘောင် filter ကိုစာနယ်ဇင်း filter ကိုပန်းကန်, ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်, filter ကိုဘောင်, filter ကိုပန်းကန်ဂီယာစနစ်နှင့်လျှပ်စစ်စနစ်ပါဝင်သည်။ ပန်းကန်နှင့်ဘောင်စစ်ထုတ်စက်၏အလုပ်လုပ်မှုနိယာမမှာအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ပထမ၊ ပန်းကန်နှင့်ဘောင်အုပ်စုကိုဟိုက်ဒရောလစ်အားဖြင့်ဖိအားပေးသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုရှိသောရွှံ့နွံသည်အလယ်မှလာပြီးစစ်ထုတ်အထည်များကြားတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
သံမဏိပြားများနှင့်ဘောင်များ၏ဖိအားများကြောင့်ရွှံ့များမလျှံနိုင်ပါ။ ဝက်အူစုပ်စက်နှင့်မြှေးစုပ်စက်၏ဖိအားမြင့်မားမှုအောက်တွင်ရွှံ့ထဲရှိရေသည်စစ်ထုတ်သည့်အထည်မှထွက်လာပြီးပြန်ပိုက်သို့စီးသွားသည်။ ရွှံ့ကိတ်သည်လိုင်ခေါင်း၌ကျန်နေသည်။ ထို့နောက်ပန်းကန်နှင့်ဘောင်၏ဖိအားကိုလျှော့ချပေးပြီး filter ပန်းကန်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးရွှံ့ကိတ်မုန့်ကိုဆွဲအားဖြင့်ကျသွားပြီးကားဖြင့်ဆွဲထုတ်သည်။ ထို့ကြောင့်စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်နောက်ဆုံးမိနစ်ဖြစ်သည့်အညစ်အကြေးသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ပန်းကန်ကိုယ်နှိုက်မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ ပန်းကန်ပျက်စီးမှု၏အကြောင်းရင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
၁။ ရွှံ့နွံများလွန်း။ ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ကျန်နေပါကထောက်ပံ့သောဆိပ်ကမ်းကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်စစ်ထုတ်ပြားများအကြားအလတ်စားမရှိသလောက်နှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကိုယ်တိုင်၏ဖိအားသာကျန်တော့သည်။ ဤအချိန်တွင်ကြာရှည်ဖိအားကြောင့်ပန်းကန်ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်သည်။
2. ပစ္စည်းမလုံလောက်ပါကသို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောအစိုင်အခဲအမှုန်များပါ ၀ င်သည့်အခါအင်အားအလွန်အကျွံကြောင့်ပန်းကန်နှင့်ဘောင်ကိုယ်နှိုက်ပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ထွက်ပေါက်ကိုအစိုင်အခဲများကပိတ်ဆို့ထားပါက (သို့) feed အဆို့ရှင် (သို့) outlet အဆို့ရှင်များစဖွင့်သောအခါပိတ်ထားလျှင်ဖိအားယိုစိမ့်မှုအတွက်နေရာမရှိပါ၊
4. filter filter ကိုမသန့်ရှင်းပါကတစ်ခါတစ်ရံ medium သည်ယိုစိမ့်လိမ့်မည်။ ၎င်းထွက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပန်းကန်နှင့်ဘောင်အစွန်ကိုတစ်စချင်းစီဆေးကြောသန့်စင်ပြီးအလယ်အလတ်ယိုစိမ့်မှုပမာဏသည်ဖိအားကိုတိုး။ မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးရွှံ့ကိတ်ကိုလည်းမဖွဲ့စည်းနိုင်ပါ။
၁။ နိုင်လွန်သန့်ရှင်းရေးခြစ်ဆေးကို အသုံးပြု၍ လမ်းကျဉ်းမှရွှံ့များကိုဖယ်ရှားပါ
သံသရာ 2.Complete နှင့် filter ကိုပန်းကန်အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချ။
3. စစ်ထုတ်သည့်အထည်ကိုစစ်ဆေးပါ၊ ရေနုတ်မြောင်းထွက်သည့်နေရာကိုသန့်ရှင်းပါ။ ထွက်ပေါက်ကိုစစ်ဆေးပါ၊ သက်ဆိုင်ရာအဆို့ရှင်ကိုဖွင့ ်၍ ဖိအားကိုလွှတ်ပါ။
၄။ filter ပန်းကန်ကိုသေသေချာချာသန့်ရှင်းပြီး filter plate ကိုပြုပြင်ပါ
filter filter ၏ပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီးနောက်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် filter ပန်းကန်၏အနားနှင့်ထောင့်များကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ ထွန်ကြောင်းအမှတ်အသားများပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့သည် filter ကိတ်မုန့်ပေါ်ပေါက်လာသည်အထိလျင်မြန်စွာတိုးချဲ့လိမ့်မည်။ ပထမတော့ကိတ်မုန့်ပျော့လာတယ်၊ ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပါးလွှာလာပြီးနောက်ဆုံးတော့ကိတ်မုန့်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အထူးတပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများကြောင့်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ပြန်လည်အစားထိုးနိုင်သည်၊ အပိုပစ္စည်းများကုန်ကျသည်။ တိကျတဲ့ပြုပြင်နည်းတွေကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ် -
၁။ လတ်ဆတ်သောမျက်နှာပြင်မှထွက်ရှိသည့် groove သန့်ရှင်းရေးကိုသန့်ရှင်းစေရန်သေးငယ်သည့်လွှဓါးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်
၁: ၁ ၏အချိုးအရအမဲရောင်နှင့်အဖြူနှစ်မျိုးကိုပြုပြင်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစား
၃။ ပြင်ဆင်ထားသည့်ပြင်ဆင်သည့်ပစ္စည်းအား groove ပေါ်တွင်အသုံးချပြီးပိုမိုမြင့်မားသောအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုပါ
၄။ filter အထည်ကိုလျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ပါ။ filter plate ကိုအတူတကွညှစ်ပါ။ ပြုပြင်အေးဂျင့်နှင့် filter အထည်ကိုအတူတကွကပ်ပါစေ။ တချိန်တည်းတွင် groove ကိုညှစ်ပါ။
5. ကာလကြာရှည်ဆေးကြောပြီးနောက် viscose သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံသဏ္takesာန်ပြောင်းလဲသွားပြီးပြောင်းလဲခြင်းမရှိတော့ပါ။ ဤအချိန်တွင်၎င်းကိုပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. filter ကိုအထည်ပေါ်ခေါက်နှင့်အပေါက်
ပန်းကန်များနှင့်ဘောင်များအကြားရေစိမ့် ၀ င်မှု၏ကုသမှုနည်းလမ်းသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်၊ နေသမျှကာလပတ်လုံးဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား၊ filter ပိတ်အထည်အစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုဖယ်ရှားရန်နိုင်လွန်ခြစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။
ဤဖြစ်ရပ်အတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်။ ဤအမှားများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းရင်းများကိုသေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ပြproblemနာအတိအကျကိုရှာဖွေသင့်ပြီးထိုပြsolveနာကိုဖြေရှင်းရန်လက်ခဏာကုသမှုခံယူသင့်သည်။ အဓိကဖြေရှင်းချက်များမှာ - အစာကျွေးခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဖြစ်စဉ်ကိုချိန်ညှိခြင်း၊ အစာပြင်ဆင်ခြင်း၊ အ ၀ တ်အထည်များကိုသန့်ရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ခြင်း၊ အနိမ့်ဖိအားမှစတင်ပါဝါ, ဖိအားတိုးမြှင့်, etc
စစ်ထုတ်သည့်အရာသည်နှေးကွေးသို့မဟုတ်အလွယ်တကူကျနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံလမ်းညွှန်လှံတံပေါ်တွင်ဆီနှင့်ဖုန်များလွန်းခြင်းကြောင့် filter ပန်းကန်သည်ဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်။ ကျလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်လမ်းညွှန်လှံတံကိုအချိန်တန်လျှင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးအမဲဆီကိုအသုံးပြုသည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာ၎င်းပါးလွှာသောဆီကိုလဲချော်ရန်လွယ်ကူ။ အောက်ခြေကိုချောစေသောကြောင့်ပါးလွှာသောဆီကိုလမ်းညွှန်လှံတံပေါ်တွင်သုံးရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်များဒဏ်ရာမတော်တဆမှုဖြစ်စေတဲ့, ဒီမှာစစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစဉ်အတွင်းပုဂ္ဂိုလ်များကျဆင်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ပန်းကန်နှင့်ဘောင်စစ်ထုတ်စက်၏ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်သည်အဓိကအားဖြင့်ဖိအားပေးသည်။ ရေနံခန်းထဲရှိဆီထည့်သွင်းမှုတိုးလာပါကပစ္စတင်သည်အကာအကွယ်ပြားကိုဖိ။ လေလုံအောင်ပြုလုပ်ရန်ဘယ်ဘက်သို့ရွေ့သွားသည်။ ရေနံအခန်း B သို့ဆီပိုထည့်သောအခါပစ္စတင်သည်ညာဘက်သို့ရွေ့သွားပြီး filter ပန်းကန်ကိုလွှတ်လိုက်သည်။ တိကျသောထုတ်လုပ်မှုကြောင့်သင်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအာရုံစိုက်နေသရွေ့ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ပျက်ကွက်မှုနည်းပါးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, wear and မျက်ရည်ကြောင့်, ရေနံယိုစိမ့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း O-ring ကိုပြန်လည်ပြုပြင်သင့်သည်။
ဘုံဟိုက်ဒရောလစ်အမှားများမှာဖိအားကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ propulsion အတွက်မသင့်တော်သောအချက်များဖြစ်သည်။ ဖိအားကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာဆီယိုစိမ့်ခြင်း၊ အိုလက်စွပ် ၀ တ်ခြင်းနှင့် solenoid အဆို့ရှင်ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဘုံကုသမှုနည်းလမ်းများသည်အဆို့ရှင်ကိုဖယ်ရှား။ စစ်ဆေးရန်၊ အိုလက်စွပ်ကိုအစားထိုးရန်၊ solenoid အဆို့ရှင်ကိုသန့်ရှင်းစွာစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ် solenoid အဆို့ရှင်ကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ၏မလျော်ကန်သောတွန်းအားသည်လေထဲ၌အလုံပိတ်နေသည်ကိုသိသာသည်။ ဤအချိန်တွင်စနစ်သည်လေကိုစုပ်ထုတ်သလောက်လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။